We She Me: ပုပ္ပါးနတ်တောင် - ၂
| FLAGS: Myanmar , Travel
Phyo Wai Kyaw - 4/16/08, 2:19 PM
အခု အောင်ကျော်မြင့် ရေးတဲ့ ပုပ္ပါးနတ်တောင် ကိုဖတ်ပြီး ငယ်ငယ်က ခရီးသွားရတာတွေ အမှတ်ရလိုက်တာ.... ပျော်ဘွယ်မှာ နေတုံး က တော့ ရောင်းလိုက်ဝယ်လိုက် နဲ့ ဆိုတော့ မပျင်းပါဘူး... ငရုတ်ဈေးဖြတ်လိုက်...လက်တောက်ခုံတောက်လိုက်... တယ်လဲပျော်ဖို့ ကောင်း တာကလား ဗျ... မြို့ထဲ သွားရင် လမ်းလျှောက်တဲ့ လူနဲတယ်... အနီးနား ကွမ်းထွက်ဝယ်တာတောင် ဆိုင်ကယ်... စက်ဘီး နဲ့ သွားလိုက်တာပဲ ...း)
ကျနော်တော့ ပျဉ်းမနား ကို "ပျင်းရင် တောင် မနား" နဲ့ လို့ ပြောတာကြားဖူးတာပဲ... ကျနော်တို့ ပျော်ဘွယ်ကိုတော့ "ပျင်း-ပျော်-ပျက်-ပြေး ပျော်ဘွယ်လေး" ဆိုတဲ့ တဘောင်လိုလို ဘာလိုလို အနီးနားရွာတွေက ရှေးလူကြီး တွေပြောတာ တော့ကြားဖူးတယ်... ဘာမှန်းတော့မသိပါဘူး...း)
N3 - 4/16/08, 5:31 PM
ကိုယ်မသိတဲ့ အကြာင်းအရာတွေ သိရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
sawphonelu - 4/16/08, 10:17 PM
အောင် ကျော် မြင့် ဆောင်း ပါးတွေ က ကိုယ် တို့ အတွက် ဗဟုသုတ ရ ပါ တယ် ။ ကိုယ် လည်း ပုပ္ပါး ကို ငယ် ငယ် က တစ် ခေါက် ရောက် ဖူး တယ် ။ ဒီ လောက် တော့ မမှတ် မိ တော့ ဘူး ။
imaginary clouds no2- 4/16/08, 11:30 PM
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ကောင်းမူနဲ့ ဆယ်တန်းအောင်ခါစက ပုံဂံ နဲ့ ပုပ္ပါးကို ခရီးထွက်ကြတဲ့ ခရီးစဉ်မှာ လိုက်ပါခွင့်ရတယ် ။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့လွန်ပြီးလို့ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတူတူခရီးသွားကြတဲ့ အစီအစဉ်မှာ လိုက်ပါခွင့်ရတယ် ။ (ဘီအမ်လို့ခေါ်တယ်ထင်တဲ့ )ဘတ်စ်စကားနဲ့ သွားကြတယ် ။ ပိုက်ဆံ နည်းနည်းလေးပဲပေးရတာကို မှတ်မိနေတယ်။ လမ်းမှာ ခုံအောက်မှာလဲဝင်အိပ်တာပဲ ။ ကားခေါင်မိုးပေါ်မှာလဲ တက်စီးကြတယ် ။ ( သေမယ်ကံပါရင်သေတာကြာပြီ ) ၊ ရပ်တဲ့နေရာက ထန်းရည်ရရင် ထန်းရည်တီးတယ် ။ ပျော်ဖို့ အလွန်ကောင်းတယ် အန်ဒီ ။ ကားကလဲ ခုန်သလား မမေးနဲ့။ အဲသည့်ထဲက တစ်ယောက်ကပြောတယ် ။ သူ့ ဘွဲလွန်ကျမ်းကို တခြားသူတွေက အရမ်းအဆင့်မြင့်တာပဲလို့ ဝိုင်းပြောကြတယ် ။ သူကပြန်ပြောတယ် အဆင့်မြင့်တာ မဟုတ်ဘူးတဲ့ ။ အမြင့်တွေ ဆင့်ထားတာ တဲ့ ။အဲဒါကို မှတ်မိနေတယ် ။ အတူခရီးသွားရတာက စိတ်ပညာဌာန က ကျောင်းသားတွေလေ
ဝေတိုး - 4/17/08, 2:58 AM
1984-1996 မြင်းခြံ၊ညောင်ဦး၊ကျောက်ပန်းတောင်း၊ပြည် မှာမိဘတွေတာဝန်ကျပြီးကျမက1988ကစလို့ရန်ကုန်မှာကျောင်းတက်တော့ ကိုAndyအခုရေးတဲ့ခရီးကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာသွားခဲ့တာပေါ့။ အိမ်ထောင်ကျတော့လဲ အညာသားနဲ့ဆိုတော့ဒီခရီးပဲပေါ့။ အမှတ်၁ရောအမှတ်၂လမ်းကပါအကြိမ်ကြိမ်သွားဘူးတာတောင်ကိုAndyလောက်အသေးစိတ်မမှတ်မိဘူး။ ကျမအဖေအလုပ်နဲ့နယ်ဆင်းရင်းလက်ပံပြာ(ရေးတော့လက်ပံပြာ)ကိုအကြိမ်
်ကြိမ်ရောက်ဖူးတယ်။လက်ပံပြာကြက်ကြော်ကဂွေးချိုကြက်ကြော်ထက်ပိုနံမယ်ကြီးတယ်။ဂွေးချိုကဆီးသီးကောင်းတယ်။ပုဂံ၊ ပုပ္ပါးဆိုတာဧည့်သည်လာတိုင်းလိုက်ပို့ခဲ့ရတာ။(ပုပ္ပါး)ဆရာတော်ကအဘိုးအရင်းလိုပဲ။တောင်ပတ်လမ်းကကိုးတောင်ကွေ့လို့ခေါ်တာတောင်ကိုးလုံးကိုပတ်ဖေါက်ထားလို့တဲ့။အဲဒီနားကဂေါက်ကွင်းမှာကျမနဲ့အဖေအပြေးကျင့်ခဲ့တာ။1998နောက်ပိုင်းမရောက်တော့ဘူး။အမှတ်ရစရာတွေပြန်ဖော်ပေးတဲ့ကိုAndy ကိုကျေးဇူးတင်တယ်။အခုလောလောဆယ်ဒီpost ကိုဖတ်ပြီးအဲဒီခရီးကိုအရမ်းလွမ်းနေတယ်နော်။အခန်းဆက်ကိုမျှော်နေတယ်။
ဝေတိုး - 4/17/08, 3:21 AM
ပီတိ - 4/17/08, 3:23 PM
ကျွန်တော့်ဇာတိက အဲဒီဘက်မှာဆိုတော့ ကိုအန်ဒီပြောတဲ့လမ်းတွေကို အလွတ်နီးပါရနေပါပြီ။
နှစ်ဆန်းတရက်နေ့ဆို တဆွေမျိုးလုံး စားစရာတွေထည့်ပြီး ပုပ္ပါးက သစ်ပင်ရိပ်ကောင်းကောင်း ဘုန်ကြီးကျောင်းတွေသွားပြီး ပျော်ပွဲစားလိုထွက်ခဲ့ကြတာကို ပြန်ပြီး သတိရမိပါတယ်။ မောင်တော်နှမတော် ရေထွက်နားက ပိန္နဲပင်တွေ ငှက်ပျောပင်တွေ နဲ့
ဘုန်ကြီးကျောင်းကို သွားခဲ့ရတာ အပျော်ဆုံးပါပဲ။
အဟဲ.. နဲနဲ ပြင်ပေးပါရစေ။ ရန်ကုန်ကနေ ကျောက်ပန်းတောင်းသွားရင် ရွှေတောင်ကိုရောက် ပြီးတော့ ပြည်မြို့ကိုရောက်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ပြလို့(ပလို့) ရွာ ကိုရောက်တာပါ။
ပုပ္ပါးတောင်အတက်လမ်းကို မဝေတိုးပြောသွားသလို သုံးထပ်လမ်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ ဟိုးအရင်က လမ်းမှာ စမ်းချောင်းလေတခုရှိပေမယ့် အခုတော့ စမ်းချောင်းကိုပိတ် ကျောက်ပန်းတောင်းကို ရေပေးတော့ မရှိတော့ပါဘူး။
နောက်ပြီး တောင်မကြီးအလယ်မှာရှိတဲ့ night lodge မှာတည်းရတာ တကယ်ကို အရသာရှိလှပါတယ်။ သာယာ အေးမြတဲ့ပတ်ဝန်းကျင် နောက်ပြီး တဘက်က တောင်မကြီး တဘက်က တောင်ကလပ်ကို လှမ်းမြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းက သာယာလှပါတယ်။ အခုတော့ ဈေးကြီးတဲ့ ဟိုတယ်ဖြစ်နေပြီ။
ကိုအန်ဒီဆီမှာ ကွန်မန့်ပေးတာမဟုတ်ပဲ ကိုယ်ပြောချင်ရာလာပြောနေတယ်။ ဟီး…
nu-san - 4/18/08, 12:06 AM
အန်ဒီ.. ဒီပို့စ်ကို စစဖတ်ချင်း ခရီးထွက်ဖို့ ထမင်းချိုင့်ပြင်တာ ငပိကြော်၊ ငါးရံ့ခြောက်၊ ကြက်သားအချိုချက် ထည့်သွားတယ် ဆိုကတည်းက လူကသွားရည်ကျနေပြီ။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ခရီးသွားရမယ်ဆို ပျော်တာပါပဲ။
ရန်ကုန် - မန္တလေး အမှတ် ၂ လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့မြို့နာမည်တွေကို အိမ်က တောင်ငူသားက အစဉ်အတိုင်းတော့ ရွတ်ပြပါတယ်။ တောင်ငူလည်း ပြီးရော သူလည်း ဆက်မရွတ်တတ်တော့ဘူး.. အမက ပိုဆိုးပေါ့။ အန်ဒီပြောသလို အစဉ်တိုင်း မမှတ်မိဘူး။ ငယ်ငယ်ကလည်း ပထ၀ီက ၅၀ ထက်မကျော်ဘူးလေ.. အဟီး.. :D ပုပ္ပါးမှာ သတိအရဆုံးက မာလကာသီးနဲ့ စကားဝါ ပန်းနံ့ပဲ။
အန်ဒီက အသေးစိတ် ရေးပြထားတာ အခန်းဆက်ဝတ္ထုရှည် ဖတ်နေရသလိုပဲမို့ ဆက်ရန်ကို စောင့်မျှော်အားပေးနေပါတယ်...
Andy Myint - 4/18/08, 9:31 AM
အားလုံးပဲ နှစ်သစ်ပါ ပျော်ရွှင်ပါစေ။ တကယ်လည်း လူတော်တော် များများက ဒီခရီးကို သွားဖူး ရောက်ဖူးတာ ကော့မန့်တွေ တွေ့လိုက်ရတော့ ပိုသေချာ သွားတယ်။ ပြင်ပေးထား ဖြည့်ရေးထားတာတွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်တယ်။
ဖြိုးဝေကျော်.. အင်း ဒီလိုဆိုတော့လည်း ပျော်ဘွယ်က ပျော်ဖွယ်ကောင်းတာပဲ။ ပျော်ဘွယ် မုန့်ကြွတ်လည်း ကြိုက်တယ်။
လာအားပေးတာ ကျေးဇူးပါ N3
ကျွန်တော်တော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အဲဒီလို ခရီးရှည် မထွက်ဖူးဘူး မောင်တိန်။ ပျော်ရွှင်မှုရယ်၊ လွတ်လပ်မှုရယ်က လူငယ်တွေရဲ့ ဥဒါန်း ပဲလေ။ ကျွန်တော်လည်း အဲဒီက ရွာမှာ ထန်းရည်သောက်ဖူးတယ်။ ချိုချိုလေးနဲ့ မူးတာပဲ။
ဟုတ်တယ် မဝေတိုး… လက်ပံပြာက ကြက်ကြော်လည်း စားဖူးတယ်။ သူငယ်ချင်းက အဲဒီမှာ အမျိုး ထမင်းဆိုင်တွေရှိတယ်။ ကုန်ကား သမားတွေက အဲဒီမှာ အားပေးကြတယ်။
ပီတိလည်း ရေးလေဗျာ။ သိရတာပေါ။ အခုလို ပြင်ပေးတာ ကျေးဇူးပဲ။ ကျွန်တော်လည်း ရောကုန်ပြီ။ ပီတိ ပြောတာတွေ ဆက်ရေးမယ့် အထဲမှာ ပါမှာပါ။
ဟဲဟဲ.. ကြက်သားအချိုနဲ့ ငပိကြော်ကလည်း ထမင်းဖြူလေးနဲ့ဆို လိုက်တယ်လေ မနုစံ။ တောင်ငူသားက ဂျပန်မှာ ကွမ်းရော ပြတ်ရဲ့လား မေးတယ်လို့။ ဟုတ်တယ် ပုပ္ပါးလို့ ဆိုရင် စကားဝါးပန်း အကြောင်း ချန်ထားလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ။
My Wonderful Moral Thoughts - 4/19/08, 6:52 AM
Looking forward to have continues posts..,
Andy Myint - 4/22/08, 12:20 AM
Thanks Sis.. hav just posted new one.
ThuHninSee - 4/22/08, 12:33 PM
အဲလို ခရီးမထွက်နိုင်တာ ကြာပြီ။
Nyi Nyi - 8/18/10, 2:03 PM
အောင်ကျော်မြင့်ရေးတာဖတ်ပြီးအရေးအခင်းပြီးစ လက်ပန်ပျားကိုပြန်တာသွားသတိရတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ပွင့်သစ်စနဲ့။
ကာဖျူးရှိတော့တောင်တွင်းကြီးအဝင် ဆတ်သွားမှာကားလမ်းပေါ်အိပ်။ သူများတွေ ထမင်းချိုင့်မပါလို့ ငတ်တယ်။
ကိုယ်မယူချင်တဲ့အမေ့ထမင်းချိုင့်ကယ်တာ။ ကိုတွေကလမ်းသွားရင်အပြင်စာစားချင်တာ။ ခုတော့လဲ အမေ့ဟင်းတွေလွမ်းတယ်။
အမေတွေကိုကျေးဇူးဆပ်ခွင့်ရတာတို့တွေကံကောင်းတာပေါ့ကွာ။ Dr ခင်မောင်ဝင်း ရဲ့ ရေနွေးငွေ့ ရထား နဲ့အညာပြန် အမေ အကြောင်း စာအုပ်ဖတ်ကြည့်ဦးကွာ။မိုက်တယ်။
ဒီဇင်ဘာပြန်မလားလို့။ရန်ကုန်ပြန်ဖြစ်ရင် ပုဂံသွားရအောင်ကွာ။ ရွာမှာတညအိပ်၊ကြက်ကြော်၊ ထန်းရေနဲ့ဧည့်ခံမယ်။ စိတ်ကူးတွေဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးကွာ။
:P - 8/28/10, 7:54 PM
ကိုအန်ဒီ့အမေ ကြက်ရိုးနဲ့ ဂွေးတောက်ဟင်းချို စားကောင်းတဲ့ ထမင်းဆိုင်က အင်းမမြို့က ရေနီမဟုတ်၊ ရေပြာပါ။ အဲဒီနားက ရေတွင်းထဲက ရေတွေက အပြာရောင်ဖြစ်နေလို့လို့ ပြောကြတယ်။ ကျွန်မတော့ တစ်ခါမှ ရေတွင်းကို သွားမကြည့်ဖူးသေးဘူး။
အဲဒီအင်းမ ရေပြာစားသောက်ဆိုင်မှာ ဂျီ(ချေ)သား၊ ဆတ်သား၊ ယုန်သားတွေ ရတယ်။
ဘလော့ဂါမှတ်တမ်းထဲမှာ ပေါင်းတည်နဲ့ ဇီးကုန်းကြားက ကျွန်မတို့ နတ်တလင်းမြို့ကလေး ပြုတ်ကျန်ရစ်တာ စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ နောက်တစ်ခေါက်ကျ ပါအောင်ရေးပေးနော်။
ဆောင်း - 9/17/10, 11:30 AM
တိုက်၂ဆိုင်၂ဘဲ တနေ့ က တိုးရစ်ဂိုက် လုပ်ဖူးတဲ့အမ ပြောတာ က ဘုရင်ခေတ်က လူဆိုးဓါးပြတွေ ကို နယ်နှင်ဒဏ်ပေးတယ် ဆိုပြီး ပျဉ်းမနား လွင်တီးခေါင်မှာ နေစေတာ တဲ့ အဲဒီနေရာမှာ လူဆိုးဓါးပြတွေ ပေါလွန်းလို့ (ပူလွန်းတော့ ဘာမှ စိုက်မရလို့)ခရီးသွားတွေ ဖြတ်သွားတိုင်း လုယက်တိုက်ခိုက် အသတ်ခံရတာ ချည့်ဘဲတဲ့ အဲဒီပျဉ်းမနားကို ဖြတ်သွားရင် လူစုလူဝေးနဲ့ သာ သွားရတယ် ပျင်းလို့တောင်မနားရဲ လောက်အောင် မြန်မြန်သွားရ တယ် ဓါးပြတွေနဲ့ တွေ့ ရင် အသတ်ခံ ရမှာစိုးလို့ ပျင်းတောင် မနားရဲတဲ့ မြို့ပျဉ်းမနားမြို့ လို့ ခေါ်ပါသတဲ့။ တိုးရစ်ဂိုက်ပြောပြလို့ သိတဲ့ ပုံပြင်ပါ။
ဆောင်း - 9/17/10, 11:34 AM
မြေထဲဆိုတဲ့ မြို့ ဟာ အောင်လံပါ။ အောင်လံဆိုတဲ့ တံခွန်တလူလူ အောင်မြင်ခြင်း အဓိပါယ်ရတဲ့ မြို့ ကို မြေထဲလို့ ပြောင်းလို့မြို့ ခံတွေ သေလိုက်ကြတာ တဖြုတ်ဖြုတ်။ ရန်ကုန်မှာ ရှိတဲ့လမ်းတွေကိုလည်း နာမည်တွေ ပြောင်းလို့ဥပမာ မောင်ခိုင်လမ်းကို ဗိုလ်ရွဲလမ်းဆို လို့ ရွဲပြီး လူသေတာ တပတ် တလောင်းဘဲ (၈၈ နောက်ပိုင်း ပြောင်းတာ ထင်တာဘဲ) နောက်ဆုံး ၂လောင်းထပ် သွား တယ်။ နောက်ဆုံးအလောင်း အရင်ချပြီးမှ ဒုတိယနောက်ဆုံး အလောင်းချ ပြီးတဲ့ အခါမှသာ လူသေရပ်သွားတာ
ဒါက နာမည်ပြောင်းတာ စကားစပ်မိလို့ရေးလိုက်တာပါ
Thwonset - 11/15/10, 7:55 PM
ကြံကြံဖန်ဖန် ဆောင်းပြောမှပဲ တို့ပျင်းမနား လူဆိုးတွေနေတဲနေရာဖြစ်တော့တယ်. တကယ်က ပျင်းမနားဆိုတာ ခုရှိတဲ ပျင်းမနားမြို့အနောက်ဘက် ၄မိုင်လောက်အကွာက ရွာတရွာပါ ပျင်းမုံန(မက်မန်းသီဆိုလားဇီဖြူသီဆိုလား)အဒိတ်ပါယ်ရတယ် ဆိုတာပဲ .ခုပျင်းမနားနေရာက အင်္ဂလိပ်မြန်မာ ဒုတိယစစ်မှာ ဗမာ ဘုရင်နယ်(ရမည်သင်းမှာဆုံးတယ်)လဲ မပါ. အင်္ဂလိပ်နယ် (တောင်ငူမှာဆုံး) လဲမပါတဲ နယ်ကြန် (နင်းကြမ်း) လို့ခေါ တာပါ . ဆောင်းပြောတဲ လုဆိုးတွေဆိုတာပာုတ်ပါတယ် ၀ရမ်းပြေးတွေက ဒီနေရာမှာ နေရင် ၂ဘက် အဏာစက် လွတ်တယ်ဆိုပီးနေကြတာပါ. နောက် အင်္ဂလိပ် တနိင်ငံလုံးသိမ်းပီသကာာလ နင်းကြမ်းကို သူတို့ကြေးနန်းပို့ရင် မြင်ခြံနဲ မှားလို့ဆိုပီ အနီးနားက ရွာနာမည်ကိုယူလိုက်တာပါ. နင်းကြမ်းက ပျင်းမနားဖြစ်သွားတော့ ပျင်မနားရွာလေးက ပျင်းမနားပောာင်းဆိုပီ ခုထိရှိပါသေးတယ်.... ကျွန်တော်ရဲ အဘီက ပျင်မနားမှာ တရာသူးကြီးအဖြစ်နဲနေခဲပီ ကျွန်တော့ အဘေးက ပျင်းမနား KEM အထက်တန်းကျောင်းမှာ ကျောင်းအုပ်ကြီးလုပ်ခဲပါတယ်။ ကျွန်တော့ ဘိုးဘွားတွေကတော့ ပျင်မနားကနေ ဂျင်လို(ပျင်းမနားတောင်ဘက် ၂မိုင်) ကွန်ဂရက်အပီမှာ တောခိုသူပုန်ထ လာကြတာပါ. ပြီ မှ ပျင်းမနားမှာပဲ အခြေချနေခဲကြတာပါ. ဘိုးဘေးတွေ၇ဲဂူတွေ သင်ချိုင်းဖျက်ပီ ကားဂိတ်လုပ်ပီးတဲကမရှိတောပါဘူး.. ငယ်ငယ်ကတော့ ဂူအကြီးကြီးတွေကိုသွားကြည့်ဘူးပါတယ်။ ပြောချင်တာတွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ် ပျင်မနားအကြောင်းပြောရ၇င် ဒွတ်တဘောင်မင်းတိုက်လို့ ဗိသနိး ပန်ထွာမိဖုရား ထွက်ပြေးတာက စပြီ ပျင်မနား စိုက်သိပ်ပံ (ဘိုကိတ်ခြံ)ထဲမှာ ဂျပန်ခေတ်က စစ်ရုံးချုပ်ထိုင်ခဲတာအလယ် နေပြည်တော်အဆုံး.. ပဲာပဲာနေပြည်တော်တော့ သိပ်မသိတော့ဘူး နေပြည်တော်ဖြစ်တယ်အချိန် ကျွန်တော် မြန်မာပြည်မှာ တနှစ်မှာ ၂ပတ်လောက်ပဲရောက်ဖြစ်တော့လို့ပါ
(စာလုံးပေါင်း တွေ ဖြစ်သလိုပေါင်းထားတာနားလည်ပေးပါ)
Thu - 9/19/11, 4:42 PM
မြေထဲ ဆိုတဲ့ မြို့ ဟာ အောင်လံ ပါ
Just visit old post, မြေထဲ is original name and changed to (အာလံ) referred to British major Allen who led and invaded the city in colonial time.
That's why U Ne Win changed original မြေထဲ but people did not prefer it.
So, later changed (အောင်လံ) again with hybrid meanings.
ဆောင်း - 9/28/11, 5:34 PM
Thu ပြောသလိုဆိုရင် မြေထဲဆိုတာ မူလနာမည်လား ဦးနေ၀င်း မတက်ခင် ကတည်းက နေလာတဲ့ အောင်လံသား ဘကြီး ဒေါ်ကြီး တို့ မြေထဲမြို့ ဆိုတဲ့ နာမည် မပြောဖူးတော့ သု ပြောတာ အဆန်းဖြစ်နေတယ်
ဒါပေမဲ့ မြေထဲလို့ နာမည် ပြောင်းတာနဲ့ သေလိုက်ကြတဲ့ လူတွေ မနည်းဘူး အဲဒီမြို့ ခံက အမပြောလို့ သိတာ
Thu - 10/3/11, 6:21 PM
Pls see following link of Myanmar map in Bayin Naung era with city Myede-မြေထဲ